Maalinta: At-Tariq, Al-Adiyat iyo Masiixii - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Surah At-Tariq (Surah 86-The Nightcomer) waxay nooga digaysaa maalinta qiyaame ee soo socota
Eebana waa karaa inuu soo celiyo.
Maalinta la imtixaami waxa qarsoon.
(Dadka) wax xoog ah oo u gargaarana ma yeelan doono.
Suurat At-Tariq 86: 8-10
Suuradda At-Tariq waxay noo sheegaysaa in Eebbe baari doono dhammaan fikradahayaga iyo ficilladeena qarsoodiga ah iyo kuwa ceebta leh oo aan lahayn cid naga caawisa inay naga difaacdo imtixaanka xukunkiisa. Sidoo kale Surah Al-Adiyat (Surah 100-The Courser) waxay sharraxaysaa isla maalintaas.
Dadkuna Eebihiis wuu ka gaaloobay.
Taasna (xaqiiqda) wuu u marag furayaa.
Oo isagu waa ku dulman yahay maal jacaylkiisa.
Miyaanu ogayn, marka waxa xabaalaha ku jira la kala firdhiyo
Waxa laabta ku jirana waa la caddeeyaa.
In Eebahood Ogyahay Ilaa Maalintaas.
Suuradda Al-Cadiyaat 100: 6-11
Suuradda Al-Caadiyaat waxay ka digaysaa in xitaa siraha ceebta ah ee lagu yaqaanno gudaha laabteenna oo keliya la ogaan doono mar haddii Eebbe si fiican u garanayo xitaa falalkaan oo kale.
Waan ka fogaan karnaa inaan ka fikirno Maalintan soo socota waxaanan rajaynaynaa inay noo shaqeyso, laakiin Suuradaha At-Tariq iyo Al-Adiyat waxay leeyihiin digniino aad u cad oo ku saabsan Maalinta.
Miyaanay fiicnayn in la diyaariyo? Laakiin sidee?
Ciise wuxuu u yimid kuwa naga mid ah ee doonaya inay u diyaargaroobaan maalintaas. Maalinta: Wuxuuna injiilka ku yiri waa
27 Wuxuuna siiyey amar uu wax ku xukumo, maxaa yeelay, waa Wiilka Aadanaha
.Yooxanaa 5: 21-27
Ciise Masiix wuxuu sheeganayaa awood weyn – xitaa inuu kormeero Maalinta Xukunka. Awooddiisa waxaa lagu caddeeyay sida Tawreedka Nabi Muuse uu awooddiisa uga sii sheegay Abuuridda adduunka lix maalmood gudahood. Sabuurkii iyo nebiyadii ku xigay waxay sii sheegeen faahfaahinta imaatinkiisa oo caddaynaya in laga siiyay amarkan xagga Eebbe. Muxuu nebigu ula jeeday “ku alla kii hadalkayga maqla oo rumaysta kii i soo diray, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah oo lama xukumi doono”? Waxaan halkan ku aragnaa.
Tags:al-adiyatat-tariqcasharrada Isa al Masihinjiilka Yooxanaasuurada 100suurada 86suurada at taariqxukunkii ilaahay